कोरोना संक्रमणको साइकोडेमिकबाट कसरी बच्ने: डा. रवीन्द्र पाण्डे - DayKhabarDay Khabar
Day Khabar २०७७ जेठ ८, बिहिबार
जेठ ८, अहिलेको समयमा विश्वजगत कोरोनाको चपेटामा परिरहेको यो अवस्थामा नेपालपनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।
नेपालमा जनस्वास्थ्य विज्ञ समेत रहेका डा. रवीन्द्र पाण्डेले कोरोना संक्रमण इपिडेमिक, इन्डेमिक, पेन्डेमिक, इन्फोडेमिक हुँदै अहिले साइकोडेमिक भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेले बताएका छन ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा साइकोडेमिकबाट कसरी बच्ने भन्नेबारे लेखेको लेख ‘कोरोना संक्रमण अल्पकालीन हुन्छ भने मनोसामाजिक असर दीर्घकालीन हुनसक्छ भनेका छन ।
संक्रमणको साइकोडेमिकबाट कसरी बच्नेः
– आफुलाई शंका नगर्नुहोस् । शंका तथा तनावले टाउको दुख्ने, ज्वरो आएजस्तो हुने तर नाप्दा ज्वरो नदेखिने, घांटी खसखस भएजस्तो लाग्ने, रिंगटा लागेको भान हुने, कमजोरी अनुभव हुने, निद्रा नलाग्ने, मन खुसी नहुने, जोशजाँगर नहुने, छाती पोल्ने, खुट्टा पोल्ने लगायतका शारीरिक लक्षण देखिन्छन् । जसले गर्दा मलाइ कोरोना संक्रमण भयो कि भन्ने शंका लाग्दछ । आफुमाथि विश्वास गर्नुहोस्। आफ्नो इम्युनिटी पावरमाथि विश्वास गर्नुहोस् ।
– संक्रमितको संख्या सुनेर चिन्ता नगर्नुहोस् । विश्वका धेरै देशको तुलनामा हामी निकै सुरक्षित छौं । संक्रमितको पहिचान हुनु राम्रो कुरा हो। यसले रोग रोकथाममा ठूलो सहयोग गर्दछ । तपाइले सुरक्षाका बिधि अपनाउनु भयो भने संक्रमण सर्दैन । आत्मबल र इम्युनिटी पावर बलियो भएमा संक्रमण भएपनि त्यसलाई पराजित गर्न सकिन्छ ।
– अनाबश्यक बिबाद नगर्नुहोस्। यो महामारीको बेला आफ्नो, परिवारको तथा देशको चिन्तन गर्नुपर्ने समयमा राजनीतिका अनाबश्यक पक्ष \_ विपक्षमा बिबाद गर्नुको कुनै औचित्य छैन । तसर्थ जीवन र जगतको पक्षधर बन्ने बानी विकास गर्नुहोस् । यसले तनाब मुक्तिमा सहयोग गर्दछ ।
– प्रकृतिको यो अनुपम सौन्दर्यपान गर्न लालायित हुनुहोस् । रुख, फूल, पहाड, हिमाल, जुन, तारा आदि हेरेर धन्य हुनुहोस् । आफ्नो क्यामेरा / मोबाइलले यो सुन्दरतालाई कैद गर्नुहोस् ।
– चराको मिठो चिरबिर सुन्नुहोस्। हावाको संगीत सुन्नुहोस् । जनावरको भाषा बुझ्नुहोस् । मंगल ध्वनि सुनेर कानलाई सिंचित गर्नुहोस् ।
– रक्सी, चुरोट, सुर्ती, गुट्खा तथा ड्रग नखानुहोस् ।यी पदार्थले शरीर र मनलाई धुजाधुजा पार्छन् । रोगसंग लड्ने क्षमता घटाउँछन् ।
– घरमा तथा मनमा यो मन्त्र राख्नुहोस् – यो समय पनि बितेर जानेछ । त्यसपछि हाम्रो जीवन पूर्ववत लयमा फर्किनेछ । जनस्वास्थ्य विज्ञः डा. रवीन्द्र पाण्डेको सामाजिक संजाल फेसबुक वालबाट ।